DXOMARK Camera ရဲ့ နံပါတ် ၁ နေရာကို ပြန်ယူသွားတဲ့ Huawei Mate 40 Pro — Anycall Mobile
DXOMARK Camera ရဲ့ နံပါတ် ၁ နေရာကို ပြန်ယူသွားတဲ့ Huawei Mate 40 Pro
By liam October 23, 2020 1 Min Read
Huawei အနေနဲ့ မနေ့ကတုန်းက Smart Life event 2020 ကိုကျင်းပခဲ့ပြီး အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Huawei ရဲ့ Mate 40 Flagship Series အသစ်ကို တရား၀င်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Mate 40 Series ဟာ အရင် Mate 30 Series လိုပဲ ပြိုင်စံရှား Camera နဲ့ထွက်လာပါတယ်။ အခုမှာတော့ Huawei Mate 40 Pro ဟာ DXOMARK Camera နဲ့ Selfie Test မှာ 136 points နဲ့ 104 points အသီးသီးရရှိသွားပါတယ်။ ဒီအမှတ်ကြောင့်ဖုန်းဟာ Mi 10 Ultra ကိုကျော်တက်ပြီး နံပါတ် ၁ နေရာကိုပြန်ယူသွားပါပြီ။
ဒီ Huawei Mate 40 Pro မှာ 50MP f/1.9 primary camera, 20MP f/1.8 wide-angle camera, 12MP f/3.4 5x periscope camera တို့ပါတဲ့ Triple Camera Setup ကိုတပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ Selfie မှာတော့ 13MP front-facing camera ကို depth sensor နဲ့တွဲပေးထားပါတယ်။ဒီ Cameras တွေဟာ 60 fps 4K video ၊ 1080p resolution slow motion clips (480 fps) နဲ့ 3,840 fps 720p resolution Video တွေကိုရိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Selfie Camera ဟာလည်း 4K/60 videos တွေနဲ့ 1080p/240 slow-mo clips တွေကိုရိုက်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒီလို DXOMARK မှာ နံပါတ် ၁ ရသွားတဲ့အကြောင်းက ဖုန်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Wide Dynamic Range ပုံရိုက်ပေးနိုင်ပြီး Photos နဲ့ Videos မှာ တိကျမြန်ဆန်တဲ့ Auto Focus လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ DXOMARK ကဆိုထားပါတယ်။
ဒီလို Camera အကောင်းဆုံး Mate 40 Pro ကို ဘယ်ဖုန်းကများ နံပါတ် ၁ ကနေ ပြန်ဖယ်လာမလဲ?? စိတ်၀င်စားဖို့တော့ကောင်းနေပါပြီ…
HuaweiHuawei Mate 40 Series
OnePlus9Series ရဲ့ပုံတွေထွက်ပေါ်လာ…
Xiaomi ဘယ် Device တွေမှာ Android 11 ရလာမှာလဲ?
Reno5Series မှာဘယ်လို Features တွေကိုတွေ့လာရမလဲ??
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Screen ဖြန့်လို့ရတဲ့ဖုန်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ??
Samsung ရဲ့ ဘယ်Device တွေမှာ Android 11 ရလာမှာလဲ?
Xiaomi China (Stable) အလုံးတွေမှာ အရမ်းမိုက်တဲ့ Transparent Wallpaper ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
အသစ်ထွက်လာမယ့် MIUI 13 ကို Xiaomi ရဲ့ ဘယ် Device တွေမှာ အရင်ဆုံး ရလာမှာလဲ?
© 2020 | Anycall Mobile